‘साइँली’को पोस्टर सार्वजनिक, प्रदर्शन मिति कहिले ?::Online News Portal from State No. 4
हेमन्त रानाले गाएको बहुचर्चित गीत ‘सुन साइँली’बाट शीर्षक लिइएको चलचित्र ‘साइँली’को फस्र्टलुक सार्वजनिक भएको छ। सिनेमाको पोष्टर र प्रदर्शन मिति एकैसाथ सार्वजनिक गरिएको हो। सार्वजनिक पोष्टरमा सिनेमाको प्रदर्शन मिति चैत्र १५ गते राखिएको छ। सिनेमाका लेखक तथा निर्देशक रामबाबु गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत सिनेमाको पोष्टर सार्वजनिक गरेका हुन्।
रामबावु गुरुङको लेखन तथा निर्देशन रहेको सिनेमामा दयाह्याङ राई, गौरव पहारी, मेनुका प्रधानलगायतका कलाकारको मूख्य भूमिका रहेको छ। साइँली गीत चर्चित भएपछि गायक हेमन्त र अभिनेता गौरव पहारी मिलेर यो सिनेमा निर्माण गरेका हुन्। यही गीतबाट गौरव पहारी र नायिका मेनुका प्रधानलाई धेरैले साइँला साइँलीका नामबाट चिन्ने गर्छन्।